Ceni – Fifidianana depiote: “Hahazo vahana ny antoko lehibe” | NewsMada
Ceni – Fifidianana depiote: “Hahazo vahana ny antoko lehibe”
“Tamin’ny teo aloha, amin’ireo depiote miasa amin’izao fotoana izao: fifidianana amin’ny alalan’ny lisitra ny teo aloha no nampiasaina. Mifanaraka amin’ny ampaham-bato azony no isan’ny depiote azon’ny tsirairay avy.”
Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, ny faran’ny herinandro teo, ny amin’ny fiovana lehibe amin’ny fifidianana solombavambahoaka. Ny lalàna mifehy ny solombavambahoaka amin’izao fotoana izao, ny lalàna fehizoro lah. 2018-010. Voalazan’ny And. 4 amin’izany fa fidina amin’ny alalan’ny latsa-bato andraisan’ny daholobe anjara mivantana amin’ny fifidianana olon-tokana voafidin’ny maro anisa amin’ny fihodinana indray mandeha ireo solombavambahoaka.
Ny fari-pifidianana Antananarivo I, ohatra: solombavambahoaka roa no nofidina, fari-pifidianana iray. Arakaraka ny ampaham-bato azon’ny antoko no hizarana ny solombavambahoaka. Amin’izao, tsy maintsy hozaraina ho fari-pifidianana roa, ohatra, Antananarivo I fa tsy iray intsony toy ny teo aloha. Amin’izany, solombavambahoaka iray isaky ny fari-pifidianana iray no hofidina.
“Eo amin’ny lafiny politika, manome vahana ny antoko matanjaka io lalàna vaovao io raha adika amin’izay fomba fifidianana solombavambahoaka izay”, hoy izy.